Saka kure, ndinonakidzwa muchidimbu akaongorora zvachose ongororo kukanganisa framework, iro pacharo riri nyaya bhuku urefu mishonga (Weisberg 2005; Groves et al. 2009) . Kunyange zvazvo framework iri nzwisisika, kazhinji zvinoita vatsvakurudzi kusiya chinhu chinokosha: mutengo. Kunyange zvazvo mari-izvo kuyerwa nokuda kana nguva kana mari-iri zvakajeka kashoma dzakakurukurwa Vatsvakurudzi zvedzidzo, ndiko nekurovererwa chaiyo tikafuratira panguva yakaoma yedu. Kutaura zvazviri, chikonzero vatsvakurudzi bvunzurudzo mimwe vanhu pane yose ndimo kuchengetedza mari. Saka, mutengo chinokosha kuti muitiro kutsvakurudza ongororo (Groves 2004) . A kuzvipira chete-achivavarira kurerutsa kukanganisa vasingatarisi zvachose mari haisi nguva dzose muna kufarira kwedu zvakanakisisa.
The zvokukwegura kupengeswa ne mukuderedza kukanganisa vari nezvakaitwa kudzidza Scott Keeter uye nevamwe nhangaruvazhe (2000) pazuva migumisiro zvinodhura munda mabasa kuitira kuderedza isiri kupindurwa ari runhare kuongorora. Keeter uye nevamwe vaviri mawa kuongorora, mumwe vachishandisa "Standard" maitirwo ezvinhu uye umwe wakamhanya kushandisa zvesangano 'zvakaoma ". Kunyange zvazvo nzira "zvakaoma" akaita pave chimbadzo vasiri akapindura, inofungidzirwa kubva ivhu vaiva chaizvoizvo chete. Zvisinei, nzira "zvakaoma" mari nehasha kaviri uye akatora 8 nguva yakareba. Tiri nani 2 vanonzwisisa kuongorora kana 1 mumasango Ongororo kure? Zvakadini 10 vanonzwisisa kuongorora kana 1 mumasango ongororo? Zvakadini 100 vanonzwisisa kuongorora kana 1 mumasango ongororo? Pane imwe nguva mutengo pamutero vanofanira zvikunde kujeka, non-zvakananga nezvemhosva unhu.
Vakawanda mikana wakasika nokuda digitaalinen zera havasi nezvokusika inofungidzirwa kuti pachena vane kukanganisa ezasi. Asi, mikana aya nezvokusika inofungidzirwa isingadhuri uye dzichimhanya, asi zvichida nokukanganisa kuti vari pari yepamusorosoro kana zvakaoma kuyera. Sezvo vazhinji mienzaniso muchitsauko chino acharatidza, vatsvakurudzi vanoomerera rimwe Kukurirwa chete-pfungwa pamwe kurerutsa kukanganisa uchisiya vamwe kukura unhu kuenda kurasikirwa nemikana inofadza. Akapiwa ichi nezvekwakabva zvachose ongororo kukanganisa framework, isu zvino achabvisa zvinhu zvitatu chikuru chechitatu yaitonga kutsvakurudza ongororo: nzira itsva kumiririrwa (Section 3,4), nzira itsva kuti kuyerwa (Section 3,5), uye nzira itsva tichibatanidza kuongorora pamwe digitaalinen zvisaririra (Section 3,6).